Tun Tun's Photo Diary: Chris Daughtry Performs at ION Orchard, Singapore (17-Oct-2014)
သီချင်းမဆိုခင်မှာ အရင်ဆုံး Fashion Show လုပ်တာပါ။ သီချင်း ၅ ပုဒ်လောက်ဆိုပြီး ရုတ်တရက်မိုးရွာပါတယ်။ မိုးလုံးလေလုံ မဟုတ်တော့ ကျွန်တော်က ကင်မရာေ၇စိုမှာဆိုးလို. ဆက်မကြည့်တော့ပဲ ION Orchard ထဲကို ပြေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Daughtry ကတော့ သီချင်းဆို မပြတ်ပါဘူး။ မိုးတဖြည်းဖြည်းသည်း လာပြီး သူလဲ တော်တော်စိုရွဲ လာတော့မှ ခဏနားပါမည် ဆိုပြီး ပွဲခဏ ရပ်လိုက်ရပါတယ်။ မိုးက ၁၅ မိနစ်လောက်ရွာပြီးတော့ တိတ်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ သူလဲ သီချင်းပြန်ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော် စောစောက ကြည့်တဲ့ နေရာ သူများတွေ ဦးသွားပြီ ၊ မိုးလဲ မိထားတာနဲ. ဆက်မကြည့်တော့ ပဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ Daughtry ရဲ. သီချင်းဆို သံတွေ ကို နားစွံ.ပြီး အိမ်ပြန်ဖို. Bus ကားဂိတ်ကို လမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုလို. အမှတ်တရ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ HD 1080 နဲ. ကြည့်ဖို. မနေနဲ.နော်။ :P
Fashion Show Prior to Daughtry's appearance
Need this kind of lens to shoot event meh? :O
You can also check out David Cook's Performance at ION Orchard in 2012.
at 10/18/2014 04:54:00 AM